Gandaki Sanchar » बामदेवले किन संगठन विभागको पहिलो एक्सन प्रदेश २ शुरु गरे ?
बामदेवले किन संगठन विभागको पहिलो एक्सन प्रदेश २ शुरु गरे ?
माघ २१, काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश २ मा पार्टी बिघटनको चरणमा पुगेको रिपोर्टिङ पेश भयो । समूहगत छलफलका क्रममा १५ औं समूहबाट प्रदेश २ मा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेकपा धराशायी हुने कुरा उठ्यो ।
अध्यक्ष र महासचिव नगएपछि सपथग्रहण अघि बढाउन खोज्दा झडपनै भएको थियो । त्यसयता प्रदेश २ मा नेकपाका कुनै पनि भेला बैठक र पार्टीका अन्य गतिविधिहरु हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभामा राजपासँगको गठबन्धन जिताउन भने सबै पक्षका नेता खटिएर चुनाव जिताए ।आजको अनलाईन खवर बाट ।
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७६, मंगलवार १०:३८